Indlela Esilifunda Ngayo Ibhayibheli - Ama-Beroean Pickets - Ukubuyekezwa kwe-Webhu.org
Indlela Yethu Yokufunda NgeBhayibheli
Kunezindlela ezintathu ezivamile zokutadisha iBhayibheli: Ukuzinikela, Ukuxoxa ngezihloko ngezihloko, kanye ne-Expository. OFakazi BakaJehova bakhuthazwa ukuba bafunde itekisi losuku nsuku zonke. Lesi yisibonelo esihle se- kokukhonza ukutadisha. Umfundi wethulwa ne-tidbit yolwazi yansuku zonke. Isihloko ukutadisha kuhlola imiBhalo ngokusekelwe esihlokweni; isibonelo, isimo sabafileyo. Ibhuku, Lifundisani Ngempela IBhayibheli?, uyisibonelo esihle sokutadisha iBhayibheli ngokwezihloko. Nge expository indlela, umfundi usondela kule ndima ngaphandle komqondo obekade ecatshangelwe futhi ake iBhayibheli liziveze. Ngenkathi izinkolo ezihleliwe zivame ukusebenzisa indlela yokuxoxa ngezihloko ekutadisheni iBhayibheli, ukusetshenziswa kwendlela echazayo akuvamile.
Isihloko Sokufunda kanye ne-Eisegesis
Isizathu sokuthi isifundo seBhayibheli esinezihloko sisetshenziswe kabanzi yizinkolo ezihleliwe, ukuthi kuyindlela ephumelelayo nephumelelayo yokufundisa abafundi ngezinkolelo eziyinhloko zemfundiso. IBhayibheli alihlelwanga ngokwezihloko, ngakho-ke ukukhipha imiBhalo ehlobene nendaba ethile kudinga ukuhlola izingxenye ezahlukahlukene zemiBhalo. Ukukhipha yonke imiBhalo efanelekayo nokuyihlela ngaphansi kwesihloko kungasiza umfundi ukuba aqonde amaqiniso eBhayibheli ngesikhathi esifushane. Kodwa-ke kukhona ukwehla okubaluleke kakhulu esifundweni seBhayibheli esinezihloko. Lokhu kwehla kuphawuleka kakhulu kangangokuba kungumuzwa wethu ukuthi isifundo seBhayibheli esihlosiwe kufanele sisetshenziswe ngokucophelela okukhulu futhi hhayi njengeyona ndlela kuphela yokufunda.
Icala esikhuluma ngalo ukusetshenziswa eisegesis. Leli gama lichaza indlela yokutadisha lapho sifunda khona evesini leBhayibheli lokho esifuna ukukubona. Isibonelo, uma ngikholelwa ukuthi abesifazane kufanele babonwe futhi bangalalelwa ebandleni, ngingahle ngisebenzise Korinte 1 14: 35. Zifundele ngokwakho, lokho kungabonakala kungaphetheki. Uma ngenza isihloko mayelana nendima efanele yabesifazane ebandleni, bengingalikhetha lelo vesi uma ngifuna ukwenza icala lokuthi abesifazane abavunyelwe ukufundisa ebandleni. Kodwa-ke, ikhona enye indlela yokutadisha iBhayibheli engapenda isithombe esihluke kakhulu.
Isifundo Sokuhlola kanye ne-Exegesis
Ngokufunda okuchazayo, umfundi akafundi amavesi ambalwa noma isahluko sonke, kepha ufunda yonke indima, noma ngabe ifaka izahluko ezimbalwa. Ngezinye izikhathi isithombe esigcwele sivela kuphela ngemva kokuba umuntu efunde yonke incwadi yeBhayibheli. (Bheka Indima Yabesifazane ngokwesibonelo salokhu.)
Indlela yokuchaza ichaza umlando namasiko ngesikhathi sokubhala. Kubheka futhi umbhali nezethameli zakhe nezimo zabo ezenzeka ngokushesha. Ibheka zonke izinto ngokuvumelana kwayo yonke imiBhalo futhi ayiwunaki noma yimuphi umbhalo ongasiza ekufinyeleleni esiphethweni esilinganiselayo.
Iyasebenza izivivinyo njengendlela. I-etymology yesiGreki yaleli gama isho ukuthi “ukuhola uphume”; umqondo wokuthi asifaki eBhayibhelini lokho esicabanga ukuthi kusho khona (eisegesis), kepha kunalokho siyayekela isho ukuthi ichaza ukuthini, noma ngokoqobo, sivumela iBhayibheli asiholele ngaphandle (Exegesis) ekuqondeni.
Umuntu owenza ukutadisha okucacile uzama ukukhipha ingqondo yakhe ngemibono yangaphambilini nemibono yezilwane ezifuywayo. Ngeke aphumelele uma efuna ukuthi iqiniso libe yindlela ethile. Isibonelo, kungenzeka ukuthi ngawusebenzisa wonke lo mfanekiso wokuthi impilo izoba njani lapho ngiphila emhlabeni oyipharadesi ngiphelele ebusheni emva kwe-Armagedoni. Kodwa-ke, uma ngihlola ithemba leBhayibheli lamaKrestu ngalowo mbono osengqondweni yami, kuzofaka zonke iziphetho zami. Iqiniso engilifundayo kungenzeka lingabi yilokhu engikufunayo, kepha lokho ngeke kuliguqule ekubeni yiqiniso.
Ufuna the Iqiniso noma Our Iqiniso
“… Ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabaphunyuka ...” (2 Peter 3: 5)
Lokhu kucashunwe kuqokomisa iqiniso elibalulekile ngesimo somuntu: Siyakholelwa kulokho esifuna ukukukholelwa.
Ukuphela kwendlela esingagwema ngayo ukudukiswa yizifiso zethu ukufuna iqiniso - iqiniso elibandayo, eliqinile, nelinenhloso - ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto. Noma ukukubeka esimeni sobuKristu esithe xaxa: Ukuphela kwendlela esingagwema ngayo ukuzikhohlisa ukufuna umbono kaJehova ngaphezu kwawo wonke umuntu, kufaka phakathi owethu. Ukusindiswa kwethu kuncike ekufundeni kwethu uku ukuthanda iqiniso. (I-2Th 2: 10)
Ukubona Ukucabanga Okungamanga
I-Eisegesis yindlela ejwayele ukusetshenziswa yilabo abebezosigqilaza futhi ngaphansi kokubusa komuntu ngokuhumusha kabi nangokusebenzisa kabi izwi likaNkulunkulu ukuze bazitholele udumo. Amadoda anjalo akhuluma ngokusuka kwawo. Abafuni inkazimulo kaNkulunkulu noma uKristu waKhe.
“Lowo okhuluma okwakhe ufuna inkazimulo yakhe; kepha ofuna inkazimulo yalowo umthumileyo, yena uqinisile, akukho ukungalungi kuye.John 7: 18)
Inkinga ukuthi akulula ngaso sonke isikhathi ukubona lapho uthisha ekhuluma ngokwakhe. Kusukela ngesikhathi sami kulesi sithangami, ngiye ngabona ezinye izinkomba ezivamile — bazibize amafulegi abomvu-Ukuthi thayipha impikiswano esekwe encazelweni yomuntu siqu.
Ifulegi elibomvu #1: Ukungazimisele ukuvuma umbono womunye.
Isibonelo: Umuntu Umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu angahle abeke phambili John 10: 30 njengobufakazi bokuthi uNkulunkulu noJesu bamunye ngesimo noma ngesimo. Angabona lokhu njengesitatimende esicacile nesingacacile esiveza iphuzu lakhe. Kodwa-ke, uMuntu B angahle acaphune John 17: 21 ukukhombisa lokho John 10: 30 kungabhekisa ebunyeni bengqondo noma enjongweni. Umuntu B akathuthukisi John 17: 21 njengobufakazi bokuthi akekho uZiqu-zintathu. Usebenzisa ukukhombisa lokho kuphela John 10: 30 ingafundwa okungenani ngezindlela ezimbili, nokuthi lokhu kungachazeki kusho ukuthi ngeke kuthathwe njengobufakazi obuqinile. Uma uMuntu A esebenzisa i-exegesis njengendlela, khona-ke isifiso sakhe sokufunda lokho okufundiswa yiBhayibheli empeleni. Ngakho-ke uzokwamukela ukuthi uMuntu B unephuzu. Kodwa-ke, uma ekhuluma ngokusuka kwakhe, khona-ke unentshisekelo yokwenza iBhayibheli libonakale lisekela imibono yakhe. Uma lokhu kwenzeka, Umuntu A ngokuhluleka njalo wehluleka ukuvuma ngisho nokuthi kungenzeka ukuthi umbhalo wakhe wobungqina ungahle ubenamaphutha.
Ifulegi elibomvu #2: Ukuziba ubufakazi obuhlukile.
Uma uthwebula izihloko eziningi zezingxoxo ku- Xoxa neqiniso iforamu, uzothola ukuthi ababambiqhaza bavame ukuzibandakanya ekunikezeni nasekuthatheni okunempilo kepha okunenhlonipho. Kuyacaca ukuthi bonke abantu bamane banesifiso sokuthola ukuthi lithini empeleni iBhayibheli ngale ndaba. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kukhona abazosebenzisa isithangami njengenkundla yokuphakamisa imibono yabo. Singahlukanisa kanjani omunye komunye?
Enye indlela ukubona ukuthi lowo muntu usebenzelana kanjani nobufakazi obubekwa abanye obuphambene nenkolelo yakhe. Ingabe usebenzelana nayo ngokuqondile, noma ingabe uyayiziba? Uma engayinaki empendulweni yakhe yokuqala, futhi uma ebuzwa futhi ukuthi ayiphendule, ukhetha esikhundleni ukwethula eminye imibono nemiBhalo, noma ahambe ngezinhlamvu ukuze asuse ukunaka kude nemiBhalo angayinaki, ifulegi elibomvu selivele . Lapho-ke, uma esaqhutshekelwa phambili ukuze abhekane nalobu bufakazi obungebona obungokomBhalo, uhlasela yena noma adlale isisulu, sonke isikhathi uvikela inkinga, ifulegi elibomvu lizulazula ngokufutheka.
Kunezibonelo eziningi zalokhu kuziphatha kuzo zombili izinkundla kule minyaka edlule. Ngibonile iphethini kaninginingi.
Ifulegi elibomvu #3: Isebenzisa ama-Logical Fallacies
Enye indlela esingathola ngayo umuntu okhuluma okungokwakhe, ukubona ukusetshenziswa kwezimpawu ezinengqondo ekuphikisaneni. Umuntu ofuna iqiniso, ofuna lokho okushiwo yiBhayibheli kunoma yisiphi isifundo, akanasidingo sokusebenzisa ubuciko banoma yiluphi uhlobo. Ukusetshenziswa kwabo kunoma iyiphi impikiswano kuyifulegi elikhulu elibomvu. Kuyasiza kumfundi weqiniso oqotho ukuba azijwayeze nalezi zindlela ezisetshenziselwa ukukhohlisa umuntu akholwe. (Uhlu olunwetshiwe olubanzi lungatholakala lapha.)